Noma yimuphi owesifazane, ngaphambi kokuba uthole eyakho esiyingqayizivele isithombe, izinwele umbala kanye nesitayela, eziningi ukuzama. Futhi akuzona zonke search uqobo lwayo ingaba yimpumelelo. Ngokuvamile, umbala wayefisa izinwele uthola ukubonakala kakhulu ezingalindelekile, noma umane engavumelani abanikazi ukuba zingenele, isitayela ukuphila futhi kwephula self-bezibona, kuvumelana kwalo. Kodwa isimo kuleli cala ithemba, futhi iza ukusiza izinwele remover, ngakwazi ukubuyela yasekuqaleni izinwele umbala wabo.
Pickling - okubizwa ngokuthi remover izinwele umbala, uma imiphumela iyadumaza. Kwenze ngosizo imishini ekhethekile eyokusiza ukuze basuse umbala engadingeki noma usize labo kaningi lapho udayi self-umbala izinwele uwela Ukuboshelwa, Ubangela owesifazane uma sikubeka kahle, ethukile.
abalungisa izinwele abaningi abaqeqeshiwe isiqiniseko sokuthi remover izinwele - kuyinto inqubo ngokuphelele ephephile, kodwa trichologists (odokotela, ekubhekaneni impilo izinwele ukumboza ikhanda) kuyinto speak kuyadida ngakho. Iqiniso ukuthi inqubo kusekelwe umphumela chemical pickling ku isakhiwo izinwele, okuyinto esilimaza isimo sabo. Ngakho, ngaphambi kokuba izame futhi yokudaya izinwele umbala entsha ngawe, Cabangisisa ngawo wonke "kochwepheshe" futhi "nebubi." Nokho, remover izinwele - nje unamathele Wand ukuze alungise amaphutha, ngakho ukuba bagomela ngokungagunci ukuthi akudingekile ukukwenza, futhi, ngeke kukusize ngalutho kuso.
Noma yimuphi remover izinwele umbala zidinga staining okwalandela, futhi nakhu ukuzicabangela amaphuzu ambalwa:
Okokuqala inqubo pickling ngokwalo kufanele uthemba ochwepheshe, ngoba wezinwele ezinhle kuphela uzobuya ukuba wayefisa izinwele umbala kuncane kakhulu ukuphazamiseka okube empilweni izinwele zakho.
Isexwayiso Aphathe ukukhethwa imibala emva ukuwasha, ngoba kungaba kukhulu ngaphezu palette. Kungcono uthemba ochwepheshe.
Uma konke izinwele zakho Izobuya, qiniseka ukuthi uthola ukunakekelwa okufanele: ungakhohlwa ukwenza izinwele njalo buso, uthenga eziyinkimbinkimbi amavithamini ngoba empilweni yabesifazane, banake umsoco.
Kwenzakalani remover izinwele. Izibuyekezo ochwepheshe
ukwakhiwa Special ukuthi bayakwazi ukubuyisela izinwele zakho umbala, kungenziwa ngamaqembu amabili amakhulu:
Surface. Lokhu pickling kubhekwa mnene futhi inikeza izinwele zakho negalelo ubuncane ezimbi. Nge wokuwasha ebusweni izinwele zakho izoshintsha umbala waso ngu 1-2 amathoni inqubo ngamunye.
Ukujula - ngokwanele pickling nolaka kakhulu kokulimaza isakhiwo izinwele, kodwa ngempumelelo kakhulu, kunalapho ebusweni ngenhla.
Ngokuqondene Izibuyekezo ochwepheshe mayelana nenqubo kanye nemihlahlandlela, they are bonke ngazwi linye bathi ukuthi remover izinwele - ukwelashwa salon, ugcine lapho akudingekile. Nokho, ukuze aqede isidingo ukuhlaselwa okunjalo chemical izinwele zakho, ulandele imithetho elula:
Qaphela noma yiluphi uhlobo lokuhlola nezinwele, ikakhulukazi uma kuziwa ukuchayeka ezintweni nolaka.
Gwema izinwele self-umbala ekhaya.
Sebenzisa kuphela eliphezulu futhi kungase kutholakale izinwele wemvelo (lokhu kusebenza kunoma izimonyo nezinwele). Kungcono ukuphuma for a sabaqeqeshiwe ekhethekile.
Zama ukuthola master barber, nabo uzothola ulimi ezivamile futhi ubani bazi kahle ukuthi okudingayo. Khumbula, i-professional Ungakhetha ngokunembile izindlela ezifanele izinwele zakho uhlobo. Themba wezinwele wakho, futhi sibe bahle!
Indlela yokwenza izinwele zakho mkhulu ekhaya?
Indlela ukusika izinwele ngokwazo hhayi bonakalise ukuma
Indlela isitayela izinwele obuphelele naphakathi: izinketho ezingabizi kakhulu
I imoto kangcono ezisontekile: Isilinganiso. Shampoo ngoba ezisontekile "Faberlic": Izibuyekezo
Ikhethelo elihle lamabhantshi yizici ezivelele zaseMelika
Makeup abesifazane engu-50 ubudala (igxathu negxathu). Izincomo, imithetho kanye nokubuyekeza
Yiziphi izingcaphuno ezithakazelisayo kusuka amabhuku
Sauce ukuze pasta ungenza isidlo bobukhosi
Senhliziyo zabantu: Izinhlobo kanye Izimpawu
Arched Door - obugagu kanye nesitayela emaqaqasini
Kombucha: Izimo kanye nezincomo, imithetho isiphuzo ukulungiselela
Ibhajethi European seholidi Ihhotela Danica Villas
Carp ethosiwe kuhhavini - kungcono ngaso sonke isikhathi okumnandi
Kungakanani vitamin D luyadingeka usana?